Filoha Hery Rajaonarimapianina : “ Ady iraisana ny loza voajanahary ” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimapianina : “ Ady iraisana ny loza voajanahary ”
Tafiditra anatin’ny tetikady fampandrosoana an’I Madagasika ny fiatrehana ny loza voajanahary sy loza ara-boajanahary tahaka ny rivo-doza. Isan’ny lehibe amin’izany ny fiomanana. “ Tsy maintsy miomana isika. Madagasikara dia firenena isan’ireo mizaka ny vokatr’izany loza voajanahary izany. Izay tsara fihomanana ihany no tsy ho tampohan’ny tampoka. Ady iraisana ny loza voajanahary ka hiantsoako an’ireo mpiray tanindrazana hiara-hikajy ny tontolo iainana. Tokony hapetraka ho kolotsaina mihitsy izany ady amin’ny fanimbana ny tontolo iainana izany. Tsy maintsy hiady amin’izany isika. Hanampy betsaka an’ireo Faritra 22 eto amintsika ny fahazoana an’ireto fitaovana marobe avy amin’ny firenena Koreana ireto. Mitaky andraikitra avy aminareo lehiben’ny Faritra rehetra ny fikojakojana sy ny fampiasana an’izany”, hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina, nandritry ny lanonana nandraisana an’ireo fitaovana avy amin’ny firenena Koreana Tatsimo, hiatrehana ny loza ara-boajanahary, tany Toamasina omaly.
Miteti-bidy 28 tapitrisa dolara ireto fitaovana ireto ka ny Chargé d’Affaire de la Corée du Sud, Pil-Woo Kim no nanolotra izany, izay ahitana Pelles Hydrauliques miisa 22, Tractopelles miisa 22, Camion-Benne miisa 22, Ambulances miisa 22, Fiara ho an’ny mpamonjy voina miisa 22 ( miaraka amin’ny bras élévateur), Motopompes miisa 22, ary “Postes de commandement sy Cliniques mobiles” miisa 11. “ Hetahetan’ny firenena koreana mihitsy ny mizara ny fahaiza-manaony ho an’ny tombontsoan’ny mponina eto Madagasikara”, hoy ity diplomaty Koreana ity nandritry ny fandraisam-pitenenany. Efa tamin’ny volana jolay 2016 teo moa no nisokatra teto Antananarivo ny Masoivohon’ny Korea eto Madagasikara.
Vokatry ny ezaka nataon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina no nahazoana an’izao fitaovana marobe, haparitaka manerana ny Faritra 22 eto amintsika izao. “ Afaka hiatrika ny loza voajanahary isika amin’ny alalan’ireo fitaovana ireo. Afa mampihena ny fiantraikan’izany loza voajanahary izany koa ary afaka hiaro ny ain’olona mety hafoy vokatr’ireny loza voajanahary ireny”, hoy hatrany ny fanazavan’ny filoha.
Mialohan’ny vanim-potoana hisian’ny loza voajanahary dia efa azo ampiasaina ireto fitaovana ireto fa tsy hoe rehefa tonga akory ny loza. Hihena koa araka izany ny mety ho fahasimban’ny fotodrafitrasa izay efa nanahirana antsika Malagasy, rehefa mipetrapetraka avokoa ny fiomanana amin’ny fiatrehana ny loza. Hisy ny fanofanana ny mpiasa izay hikirakira an’ireto fitaovana ireto. Natolotra ho an’ny “Bngrc” na ny Birao nasionaly mandritra ny fiatrehana ny loza ara-boajanahary kosa ireo fitaovana ireo.
“Hotohizana ny fiaraha-miasa ary hamifisina orina ny fiaraha- miasa amin’ny fanjakana Malagasy, ahafahan’i Madagasikara mahita fampandrosoana” io no nambaran’ny masoivoho Amerikana nandritra ny fankalazana ny faha- 241 nahazoan’i Etazonia ny fahaleovantenany sy ny faha- 150 ...Tohiny